Shaxdii ugu wanaagsaneyd ee tartankii Dowlad Gobboleedyadda ee Dalka – Gool FM
Shaxdii ugu wanaagsaneyd ee tartankii Dowlad Gobboleedyadda ee Dalka
Kaafi July 28, 2016
(Muqdisho) 28 Luulyo 2016.Waxaa Talaadadii lagu soo gaba gabeeyey Muqdisho tartankii Dowlad Gobboleedyada Soomaaliya oo ay a qeyb galeen afar Maamul Gobboleed iyo Shabeellaha Dhexe/Hiiraan oo wada jiray iyo Gobbolka Banaadir.
Tartanka oo socday muddo 11 maalmood ah ayaa waxaa ugu dambeyn hantay Puntland oo gool ku laadyo 5-3 ah uga adkaatay Jubbaland.
Hadaba GoolFm.net waxa ay ka diyaarisay shaxdii ugu wanaagsaneyd ee xulalkii ka qeyb galay laga soo xulay. dabcan tirada ugu badan waxaa ku leh Puntland (5) iyo Jubbaland (4) oo isugu yimi Fiinaalaha halka Banaadir ay ku leedahay hal Ciyaaryahan (Buush), Shabeellaha Dhexe/Hiiraan waxa ay ku leeyihiin hal (Goolhayaha).
Yaman (Shabeellaha dhexe/Hiiraam)
Goolhayaha Shabeellaha dhexe/Hiiraan waxa uu sameeyey bandhigyo cajiib ahaa oo ay isla qireen taageereyaashii Garoonka. Kulankii Galmudug isaga ayaa u sahlay guusha, dadka qaar waxa ay qabaan la’aantiis in aysan ka soo bexeen Group-kii ay ku jireen, hayeshee, waxa uu si dirqi ah booskan uga galay Guuleed oo ahaa Goolhayihii Puntland oo hantay koobka isaga oo qabtay Rigoorihii ay guusha uga gaareen Jubbaland Fiinaalihii.
Dambeed Middig: Gacmo (Puntland)
-Gacmo waxa uu ahaa mid ka mida udub dhexaadyadii koobka u gacan galiyey Puntland isaga oo mar walba xoojinayey duulaanka hore halka dhinciisa ay isku haleyn weyn ku qabeen xiddigaha la dheelayey.
Daafac dhexe: Maxamed Deeq (Jubbaland)
-Waxa uu ahaa kabtan ay si weyn ugu tiirsanaayeen Jubbaland marka la eego abaabulkiisa sidoo kale waxa uu raqba daafacooda ka ahaa mid aan la dhaafi karin.
Daafaca dhexe: Cabdulaahi Yare (Puntland)
-Taageereyaasha Puntland iyo Ciyaaryahanadaba waxa ay ku tilmaameen ‘Pepe ha) P/Land, dabcan waxa uu ahaa daaficii ugu saameynta badnaa ee safkii qaaday tartanka, xitaa labadii kulan ee ugu dambeeyey ee uu dheelay waxa uu ku ciyaaray dhaawac ka soo gaaray gacanta.
Dambeed Biddix: Muudi (Jubbaland)
Maxameed Muudi (Lambarka 3-da). waxa uu ka mid ahaa daafacyadii ugu adkaa ee tartanka waxa uuna mar walba qatar ku ahaa garabka biddix isaga oo weerarka la qaadayey saaxiibadiis isla markiina dib ula soo laabanyey marka ay daafaca joogaan,sidoo kale waxa uu lahaa laan jan jeero (Cross) wanaagsan.
Dhex: Cabdisalaan Dhiidhiye (Puntland)
Shaki la’aan Cabdisalaan Jaamac Faarax (Dhiidhiye) waxa uu ahaa XIDDIGII TARTANKA. Laacibka waxa uu sida uu doono u maamulanayey khadka dhexe isaga oo isku xirayey daafaca iyo weerarka. Taas waxa ay dhalisay in muran laga keeno ka qeyb qaadashadiisa koobka maadaama uu xulka qaranka Soomaaliya matalayey hadana lagu daray.
Garag Middig: Dhakab (Puntland)
Marka laga yimaado Dhiidhiye Laacibka Lambarka 8-daad u watay Puntland, Dhakab waxa uu ahaa xiddigii ugu wanagsanaa ee xulka hantay koobka, waxa uu si fiican ula jaan qaadayey Dhiidhiye mar walbana waxa uu halis ku ahaa xerada ganaaxa ee kooxda kale, waxaa intaas u dheereed ku xaragoodka kubadda oo marka uu haysto ay jamaahiirta ku raaxeysanayeen.
Garab Biddix/Middig: Axmed Qaldaan (Jubbaland)
Axmed Qaldaan si weyn ayuu uga dhex muuqday tartanka waxaana lagu tilmaamay mid ka mida hibooyinka u soobaxaya Dalka. Waxa uu mar walba bilaabayey duulaanka Jubbaland isaga oo labada garabka weerarka si isku mid ah uga qaadayey, diibabka ayaa u dheeraa oo mar walba halis ahaa.
Weerar, garab middig: Buush (Banaadir)
Walow Banaadir ay ku hartay afar dhamaadka tartanka iyada oo ay badisay kulan kaliya (5-0 Koonfur Galbeed) hadana Buush waxa uu dhaliyey afar gool, laba waxa uu ka dhaliyey K/Galbeed labana Puntland.
Weerar dhexe: Yacquub (Puntland)
Weeraryahanka Puntland isna waxa uu dhaliyey afar gool, saddex waxa uu ka ugu shubay K/Galbeed,midna Shabeellaha Dhexe/Hiiraan.
Xiddiga waxa uu laf dhuun gashay ku ahaa daafacyaddii ka hor imaaday waxa uuna astaan u lahaa xakameynta, awood jireedka iyo boos qaadasha walow uu xawaare gaabiyey.
Weerar, garab biddix: Fu’aad Nookiya: (Jubbaland).
Fu’aad waxa uu ahaa Xiddigii ugu wacnaa Jubbaland sida ay falanqeeyeyaasha ku qiimeeyeen, meel walba wuu ka dhameystirnaa halka uu ahaa dhiiri galiyey kooxda, isaga ayuu weerarka ka bilaabanayey kuna dhamaanayey. Fiinaalihii waxa uu dhaliyey goolkii ugu dhaqsiyaha badnaa ee tartanka.
W/D: Mohamed Musa Mohamed (Moh’ed Kaafi)
Xuquuqday Sawiradda waxaa iska leh: Cali Cabdi Ducaale.